सुन बेचेर सडकमा कोरोनाले छ’टपटाइरहेका बि’रामीलाई अक्सिजन दिने व्यक्तिवि’रुद्ध किन पर्‍यो उ’जुरी ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियसुन बेचेर सडकमा कोरोनाले छ’टपटाइरहेका बि’रामीलाई अक्सिजन दिने व्यक्तिवि’रुद्ध किन पर्‍यो उ’जुरी ?
सुन बेचेर सडकमा कोरोनाले छ’टपटाइरहेका बि’रामीलाई अक्सिजन दिने व्यक्तिवि’रुद्ध किन पर्‍यो उ’जुरी ?
बिबिसी – भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित जौ’नपुरको एउटा सरकारी अस्पतालबाहिर अक्सिजन अभावमा त’ड्पिरहेका बि’रामीहरूलाई आफ्नो एम्बुलेन्सबाट अक्सिजन दिने युवकवि’रुद्ध स्थानीय प्रशासनले उ’जुरी दर्ता गरेको छ। उक्त क’दमलाई कैयौँले अरूलाई सहायता गर्न चाहने मानिसलाई प्रशासनले अ’वरोध गर्न खोजेको रूपमा हेरिरहेका छन्।
ती युवकले अस्पतालबाहिर “अव्यवस्था उत्पन्न गरेको र स्वास्थ्यकर्मीलाई स’मस्या भएको” प्रशासनको तर्क छ। जौनपुर जिल्लाका प्रमुख अधिकारी मनीष वर्माले बीबीसी हिन्दीसँग कुराकानी गर्दै भने, “अहिले ती युवकवि’रुद्ध कुनै कारबाही गरिएको छैन, ए’डीएमको समूहले पूरै मा’मिलाबारे जाँ’च गरिरहेको छ।
प्रशासनको उद्देश्य कसैलाई बिनाकारण द’ण्डित गर्ने होइन।” जौनपुर कोतवालीमा विक्की अ’ग्रहरि नामका ती युवकवि’रुद्ध म’हामारी ऐ’नको दफा ३ र भा’रतीय द’ण्डसंहिताको दफा १८८ तथा २६९ अनुसार जाहे’री दर्ता गरिएको छ। यो जा’हेरी जौनपुरका मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमओ) को उ’जुरीका आधारमा दर्ता गरिएको हो।
विक्की अ’ग्रहरिले बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै भने, “मैले बि’रामीहरू अक्सिजन नभएर त’ड्पिरहेको देख्न सकिनँ। त्यसैले आफ्नै एम्बुलेन्सबाट सि’लिन्डर नि’कालेर अक्सिजन दिएँ।” आफ्नो उ’जुरीमा सीएमओले भनेका छन्, “विक्की र अन्य व्यक्तिहरू टिकट का’उन्टरनजिकै सास फे’र्न स’मस्या भइरहेका बि’रामीहरूलाई सिलिन्डरबाट अक्सिजन दिइरहेका थिए र भिडिओ बनाइरहेका थिए।”
“उनीहरूले त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूलाई शा’सन-प्रशासनका तर्फबाट केही व्यवस्था गरिएको छैन र हामीहरू बि’रामीहरूलाई बताउने कोसिस गरिरहेका छौँ भनिरहेका थिए।” सहयोग गर्ने युवकवि’रुद्ध जा’हेरीले प्रशासनको छ’विप्रति नकारात्मक असर पर्न सक्ने हुँदाहुँदै किन जा’हेरी दर्ता गरियो भन्ने प्रश्नमा डी’एम मनीष वर्माले भने, “मेरो जानकारी अनुसार ती युवक अस्पतालबाहिर बि’रामीहरूलाई अक्सिजन दिएर भिडिओ बनाइरहेका थिए।”
“त्यस बेला अस्पतालमा श’य्याहरू उपलब्ध थिए। जसलाई बाहिर अक्सिजन दिइयो उनीहरू सबैलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।” “हाम्रा अधिकारी र स्वास्थ्यकर्मी पनि आफ्नो ज्यान ख’तरामा राखिरहेका छन्। उनीहरूको कोसिसले त मिडियामा स्थान पाउँदैन। तर जब कुनै न’कारात्मक खबर आउँछ त्यसलाई ठूलो बनाइन्छ। यसले अधिकारीहरूको मनोबल गिर्छ।”
उनले कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरका बीच पनि जौनपुरमा स्थिति धेरै ह’दसम्म नियन्त्रणमा रहेको र अक्सिजन तथा श’य्याको स’ङ्कट नभएको दा’बी गरे। चौतीस वर्षीय वि’क्की अ’ग्रहरि एम्बुलेन्स चालक हुन्। बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “मसँग एम्बुलेन्समा दुईवटा सिलिन्डर थिए। दुई साताअघि मैले आफ्नी पत्नीको सुन बेचेर अन्य चार सिलिन्डर किनेँ।
“दुई सिलिन्डर मलाई दा’नमा प्राप्त भयो। मैले हालसम्म १०० जनाभन्दा बढीलाई अक्सिजन दिएर मद्दत ग’रिसकेको छु।” उनका अनुसार उनले २०,००० भारु प्रतिसि’लिन्डरका दरमा अक्सिजन किनेका हुन्। बुधवार एकजना ग’म्भीर बि’रामीलाई अस्पतालमा लिएर जाँदा त्यहाँ अक्सिजन नपाएर छ’टपटाइरहेका बि’रामी देखेपछि आफूले एम्बुलेन्सको अक्सिजन दिएको उनी बताउँछन्।
एक जनालाई अक्सिजन दिएपछि अन्य बि’रामी पनि आएर भि’ड लागेको उनको दा’बी छ।उत्तर प्रदेश सरकारको को’भिड नीतिलाई लिएर च’र्को आ’लोचना गर्ने सूर्यप्रताप शाहीले सरकारले सहायता गर्नेवि’रुद्ध जा’हेरी दर्ता गरेर उनीहरूलाई ह’तोत्साह गर्ने कोसिस गरेको बताए।
जापानमा तलब बृदिको तयारी गर्दै प्रधानमन्त्री सुगा
को’रोना खोप भनेर स’लाइन पानी दिएपछि अस्पतालले मा’फी माग्यो
लकडाउनमा पत्नीलाई भेट्न बस चोरेर गए यी पति
प्रहरीले अ’वै’ध म’सा’ज पा’र्ल’र’मा छा’पा मा’र्दा प्रहरीकै बरिष्ठ अधिकारी रं’गेहात स’मातिएपछि हंगामा !
विहेको भोजमा मासु नदिएको भन्दै घ’नघो’र ल’डाईँ, १ जनाको मृ’त्यु, ३ जना ग’म्भीर घा’ईते
भाग्यमानी मानिस जो ग’ल्ती गरेर पनि भाग्यले बा’चे, तपाई कल्पना पनि गर्न सक्नु हुन्न
बर्थ-डे पार्टीमा नबोलाएको रिसमा अमेरिकामा ६ जनाको गो’ली हा’नी ह’त्या